Kyerɛ Obu ma Nkwa nye Bɔgya dɛ Nyankopɔn Akyɛdze
KENKAN WƆ Abbey Abkhaz Abui Acholi Afrikaans Aja Akha Albanian Altai Alur America Mmum Kasa Amharic Angola Mmum Kasa Arabic Argentina Mmum Kasa Armenian Armenian (West) Assamese Ateso Attié Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Bassa (Liberia) Batak (Karo) Batak (Simalungun) Batak (Toba) Belize Kriol Biak Bicol Bislama Bolivia Mmum Kasa Boulou Bété Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Changana (Zimbabwe) Chavacano Chichewa Chiga Chile Mmum Kasa Chin (Hakha) Chin (Tiddim) Chin (Zotung) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Mmum Kasa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chopi Chuabo Chuvash Cibemba Cinamwanga Cinyanja Colombia Mmum Kasa Croatian Cuba Mmum Kasa Czech Czech Mmum Kasa Damara Dangme Danish Dayak Ngaju Digor Douala Drehu Dusun Dutch Edo Efik Emberá (Catío) English (Borɔfo) Esan Estonian Ewe (Awona) Faroese Fijian Finland Mmum Kasa Finnish Fon French Futuna (East) Ga (Nkran Kasa) Galician German Gitonga Gokana Greek Guadeloupean Creole Guarani Guarani (Bolivia) Guerze Guianese Creole Gun Guéré Haitian Creole Hausa Havu Herero Hiligaynon Hindi Hungarian Hunsrik Iban Ibanag Ibinda Igbo Iloko India Mmum Kasa Indonesia Mmum Kasa Indonesian Irish Isoko Italian Italy Mmum Kasa Ivory Coast Mmum Kasa Japanese Javanese Jula Kabardin-Cherkess Kabiye Kabuverdianu Kachin Kalenjin Kannada Kanyok Karen (S'gaw) Kazakh Kazakh (Arabic) Khakass Khana Kikamba Kikaonde Kikongo Kikongo ya Leta Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinande Kinyarwanda Kipende Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisii Kisonge Kituba Kongo Korea Mmum Kasa Korean Kpelle Krio Kurdish Kurmanji Kwangali Kwanyama Kyangonde Lahu Lamba Lambya Laotian Lari Lega Lendu Lenje Lhukonzo Lingala Lithuanian Lolo Lomwe Lovari Luganda Lugbara Lunda Luo Luvale Macua Makhuwa-Shirima Makonde Malagasy Malay Malayalam Malaysia Mmum Kasa Maltese Mam Mambwe-Lungu Manyawa Mapudungun Marathi Mari Mashi Mauritian Creole Maya Mazahua Mbunda Mende Meru Mexico Mmum Kasa Mfantse Mixe (North Central) Mizo Mongolian Moore Myanmar Myanmar Mmum Kasa Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Navajo Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nengone Nepali Nepali Mmum Kasa Ngabere Ngangela Ngbandi (Northern) Nias Nigerian Pidgin Niuean Norwegian Nsenga Nsenga (Mozambique) Nyaneka Nyungwe Nzema Odia Okpe Oromo Ossetian Otetela Otomi (Mezquital Valley) Pangasinan Phimbi Pidgin (Cameroon) Pidgin (West Africa) Poland Mmum Kasa Polish Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Mmum Kasa Punjabi (Shahmukhi) Quebec Mmum Kasa Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Pastaza) Quichua (Santiago del Estero) Quichua (Tena) Rarotongan Romania Mmum Kasa Romanian Romany (Bulgaria) Romany (Eastern Slovakia) Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Northern Greece) Romany (Serbia) Romany (Southern Greece) Ronga Runyankore Russian Rutoro Réunion Creole Samoan Sangir Sango Sena Sepedi Sepulana Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovakia Mmum Kasa Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Mmum Kasa Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Sweden Mmum Kasa Swedish Tagalog Tahitian Tajiki Talian Tamil Tandroy Tankarana Tarahumara (Central) Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Tewe Thai Thailand Mmum Kasa Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Uighur (Cyrillic) Ukrainian Umbundu Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vezo Vietnamese Vietnamese Mmum Kasa Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Welsh Wichi Wolaita Xhosa Yacouba Yoruba (Alata) Zande Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Obu a Yɛbɛkyerɛ Ama Nkwa
1. Woana na ɔmaa hɛn nkwa?
JEHOVAH nye “Nyankopɔn tseasefo” no. (Jeremiah 10:10) Ɔno nye hɛn Bɔfo na ɔno na ɔmaa hɛn nkwa. Bible no kã dɛ: “Ɔwo na ebɔɔ adze nyina, na wopɛ ntsi na wɔwowɔ hɔ, na wɔbɔe.” (Nyikyerɛ 4:11) Ampaara dɛ, Jehovah pɛ dɛ yenya nkwa. Nkwa yɛ akyɛdze a ɔsom bo a ofi ne nkyɛn.​—Kenkan Ndwom 36:9.
2. Yebesi dɛn na yaama hɛn asetsena esi hɛn yie?
2 Jehovah ma hɛn ndzɛmba a yehia tse dɛ edziban na nsu, na ama yaakɔ do atsena ase. (Ndwuma 17:28) Naaso, dza ɔkyɛn iyinom nyinara no, ɔpɛ dɛ yedzi dɛw wɔ asetsena mu. (Ndwuma 14:15-17) Sɛ obesi hɛn yie wɔ asetsena mu a, ɔsɛ dɛ yɛyɛ aso ma Nyankopɔn ne mbransɛm.​—Isaiah 48:17, 18.
MBRƐ NYANKOPƆN BU NKWA
3. Aber a Cain kum Abel no, ebɛnadze na Jehovah yɛe?
3 Bible no kyerɛkyerɛ hɛn dɛ, hɛn nkwa na nyimpa afofor nkwa som bo ma Jehovah. Dɛ nhwɛdo no, ber a Adam na Eve hɔn ba Cain no bo fuuw no nua kakraba Abel dzendzenndzen no, Jehovah bɔɔ Cain kɔkɔ dɛ ɔsɛ dɛ ɔhyɛ n’ebufuw do. Naaso Cain enntsie, mbom no bo fuuw araa ma ‘ɔsoɛɛr no nua Abel do, na okum no.’ (Genesis 4:3-8) Jehovah twee Cain n’aso wɔ ku a okum no nua Abel no ho. (Genesis 4:9-11) Ntsi ebufuw na ɔtan yɛ adze a ɔyɛ hu, osiandɛ obotum ama yaayɛ nkorɔfo a yedzi emim anaa ewudzifo. Nyimpa a ɔtse dɛm no runntum nnya onnyiewiei nkwa. (Kenkan 1 John 3:15.) Sɛ yɛbɔsɔ Jehovah n’enyi a, ɔsɛ dɛ yɛdɔ nyimpa nyina.​—1 John 3:11, 12.
4. Ebɛnadze na mbransɛm a Nyankopɔn dze maa Israelmba no no mu kor kyerɛkyerɛ hɛn fa nkwa ho?
4 Mfrenhyia mpempem pii ekyir no, Jehovah maa yehun dɛ obu nkwa dɛ ɔsom bo ber a ɔdze Mbransɛm Du no maa Moses no. Mbransɛm no no mu kor nye dɛ: “Mma nndzi ewu.” (Deuteronomy 5:17) Ntsi sɛ nyimpa bi hyɛ da ku obi a, nna woboku dɛm nyimpa no so.
5. Nyankopɔn tse nkã dɛn wɔ nyinsen-tugu ho?
5 Nyankopɔn tse nkã dɛn wɔ nyinsen-tugu ho? Abofra a ɔhyɛ yafun mu mpo no, no nkwa som bo ma Jehovah. Wɔ Mbra a Jehovah dze maa Israelmba no mu no, Jehovah kãe wɔ mu dɛ, sɛ obi pira ɔpemfo na sɛ ne ba no wu a, woboku dɛm nyimpa no so. (Kenkan Exodus 21:22, 23; Ndwom 127:3.) Iyi kyerɛ hɛn dɛ, nyinsen-tugu nnyɛ.​—Hwɛ Nsɛm bi a Wɔakyerɛ Mu 28.
6, 7. Yebesi dɛn ama Jehovah ehu dɛ yebu nkwa dɛ ɔsom bo?
6 Yebesi dɛn ama Jehovah ehu dɛ yebu hɛnankasa hɛn nkwa nye afofor dze dɛ ɔsom bo? Ɔnnsɛ dɛ yɛyɛ adze biara a ɔdze hɛn nkwa nye afofor dze bɔto esian mu. Dɛm ntsi, yɛronnom towa, wii anaa yɛremmfa ndubɔn biara nndzi dwuma, osiandɛ obotum epira hɛn anaa mpo eku hɛn.
7 Nyankopɔn na ɔdze hɛn nkwa nye hɛn nyimpadua ama hɛn, ntsi ɔsɛ dɛ yɛdze yɛ dza ɔpɛ. Iyi hwehwɛ dɛ, yɛhwɛ hɛn nyimpadua do yie. Sɛ yɛannyɛ dɛm a, hɛn ho renntsew wɔ Nyankopɔn enyim. (Romefo 6:19; 12:1; 2 Corinthfo 7:1) Sɛ yemmbu nkwa dɛ ɔsom bo a, yerunntum nnsom Jehovah a ɔmaa hɛn nkwa no. Ɔwɔ mu dɛ obotum ayɛ dzen dɛ yebegyaa suban bɔn dze, naaso sɛ yɛrobɔ mbɔdzen dɛ yebegyaa osiandɛ yebu nkwa dɛ ɔsom bo ntsi a, Jehovah bɔboa hɛn.
8. Ebɛnadze na yɛbɛyɛ mbrɛ ɔbɛyɛ a yɛremmfa hɛnankasa nkwa anaa afofor nkwa nnto esian mu?
8 Yeehu dɛ nkwa yɛ akyɛdze a ɔsom bo. Jehovah wɔ hɛn mu awerɛhyɛmu dɛ yɛbɛyɛ dza yebotum biara dɛ yɛremmfa hɛnankasa hɛn nkwa anaa afofor nkwa nnto esian mu da. Dɛm ntsi, yɛyɛ ahwɛyie wɔ mbrɛ yesi kã hɛn kar, moto anaa hɛn fofor biara. Yekwetsir agodzi a esian anaa basabasayɛ wɔ mu. (Ndwom 11:5) Bio so, yɛyɛ dza yebotum biara dɛ yɛnnkɛma hɛn fie ayɛ beebi a esian wɔ. Jehovah maa Israelmba no ahyɛdze dɛ: “Sɛ isi dan fofor a, ɔno gye wo dan etsifi ban, ama sɛ obi fi do hwe ase a, aammfa bɔgya ammba wo dan no do.”​—Deuteronomy 22:8.
9. Ebɛn kwan do na ɔsɛ dɛ yɛnye mbowa dzi?
9 Mbrɛ yesi nye mbowa mpo dzi no ho hia Jehovah. Ɔma hɛn kwan ma yeku mbowa dze yɛ edziban nye ntar. Bio so, sɛ abowa bi pɛ dɛ ɔdze hɛn nkwa to esian mu a, ɔma hɛn kwan ma yetum ku no. (Genesis 3:21; 9:3; Exodus 21:28) Naaso, yerunntum nnyɛ mbowa ayaayaadze anaa yennku hɔn mmfa nngyegye hɛn enyi kɛkɛ.​—Mbɛbusɛm 12:10.
NKWA YƐ ADZE A ƆSOM BO
Yennku abofra a ɔhyɛ yafun mu
Yɛnntan nyimpa afofor
Yɛmmfa towa, wii anaa ndubɔn fofor biara nndzi dwuma
KYERƐ OBU MA KRƆNKRƆN A NKWA YƐ NO
10. Yesi dɛn hu dɛ bɔgya gyina hɔ ma nkwa?
10 Jehovah bu bɔgya dɛ ɔyɛ krɔnkrɔn, osiandɛ bɔgya gyina hɔ ma nkwa. Aber a Cain kum no nua Abel no, Jehovah kãa kyerɛɛ Cain dɛ: “Wo nua no bɔgyaa ne ndze fi famu keka mu frɛ me.” (Genesis 4:10) Nna Abel no bɔgyaa gyina hɔ ma no nkwa, dɛm ntsi Jehovah twee Cain n’aso ber a okum Abel no. Bio so, wɔ Noah Nsuyirii no ekyir no, Jehovah maa wohun dɛ bɔgya gyina hɔ ma nkwa. Jehovah maa Noah nye n’ebusua kwan dɛ wonku mbowa mfa nyɛ edziban. Ɔkãa dɛ: “Adze a ɔkeka noho a nkwa wɔ mu nyinara ɔnyɛ edziban mma hom; dɛ mbrɛ medze mfunoma mama hom no na medze ne nyinara mama hom.” Naaso nna adze kor bi dze, Jehovah ahyɛ hɔn dɛ mma wonndzi: “Na nam a no nkwa wɔ no mu, ɔnye dɛ no bɔgyaa, mma hom nndzi.”​—Genesis 1:29; 9:3, 4.
11. Ebɛn mbra a ɔfa bɔgya ho na Nyankopɔn dze maa Israelmba no?
11 Bɛyɛ mfrenhyia 800 ekyir ber a Jehovah kãa kyerɛɛ Noah dɛ mma onndzi bɔgya no, ɔsanee maa no nkorɔfo ahyɛdze bio dɛ: “Na nyimpa biara a ofi Israelmba mu, anaa ofi ahɔho a wɔabɔsoɛ hɔn mu no mu a ɔyɛ ha no, ku abowa anaa anoma biara a wodzi a, ɔnsɔn no bɔgyaa ngu, na ɔmfa dɛtse nkata do.” Afei, ɔdze kãa ho dɛ: “Mma hom nndzi honam biara no bɔgyaa.” (Leviticus 17:13, 14) Nna Jehovah da ho ara pɛ dɛ no nkorɔfo bu bɔgya dɛ ɔyɛ krɔnkrɔn. Nna wobotum awe nam no, naaso bɔgya no dze, ɔnnsɛ dɛ wodzi. Sɛ woku abowa dɛ wɔdze bɛyɛ edziban a, nna ɔsɛ dɛ wohue no bɔgyaa no gu famu.
12. Christianfo bu bɔgya dɛn?
12 Jesus wui mfe bi ekyir no, asomafo no nye mpanyimfo a nna wɔwɔ Christianfo asafo no mu wɔ Jerusalem no hyiae sii gyinae wɔ Mbra no ne fã ahorow a ɔsɛ dɛ Christianfo kɔ do dzi do no ho. (Kenkan Ndwuma 15:28, 29; 21:25.) Jehovah boaa hɔn ma wɔtsee ase dɛ, bɔgya da ho ara som bo ma no, ntsi ɔsɛ dɛ wɔkɔ do ara bu bɔgya dɛ ɔyɛ krɔnkrɔn. Nna Christianfo a wodzi kan no runntum nndzi anaa wɔnnom bɔgya anaa wonndzi abowa a wɔahyɛ no fõ, kyerɛ dɛ abowa fun. Nna bɔgya a wobedzi no yɛ adze a omuo tse dɛ abosonsɔr anaa ndwamanyɛ. Ofitsi dɛm aber no reba no, Christianfo ekwetsir dɛ wobedzi anaa wɔbɔnom bɔgya. Na ndɛ so ɛ? Jehovah da ho ara pɛ dɛ yebu bɔgya dɛ ɔyɛ krɔnkrɔn.
13. Ebɛnadze ntsi na Christianfo nngye bɔgya?
13 Aso iyi kyerɛ dɛ ɔsɛ dɛ Christianfo kwetsir dɛ wɔbɛgye bɔgya? Nyew, dɛm na ɔkyerɛ. Jehovah ahyɛ hɛn dɛ ɔnnsɛ dɛ yedzi anaa yɛnom bɔgya. Sɛ dɔkta kã kyerɛ wo dɛ mma nnom nsã a, ana edze bɛfa wo ntsin mu akɔ wo nyimpadua mu? Dabida! Dɛmara so na ahyɛdze a ɔnye dɛ, mma yenndzi anaa yɛnnom bɔgya no kyerɛ dɛ, yɛrenngye bɔgya.​—Hwɛ Nsɛm bi a Wɔakyerɛ Mu 29.
14, 15. Ebɛnadze ntsi na ohia dɛ Christianfo kyerɛ obu ma nkwa na wɔyɛ setsie ma Jehovah?
14 Na sɛ dɔkta bi kã kyerɛ hɛn dɛ, yɛanngye bɔgya a yebowu so ɛ? Iyi mu dze, ɔsɛ dɛ ankorankor biara si gyinae dɛ obedzi Nyankopɔn ne mbra a ɔfa bɔgya ho no do anaa orinndzi do. Dɛ Christianfo a yɛwɔ obu kɛse ma nkwa no, yɛbɔ mbɔdzen hwehwɛ ayarsa a wɔmmfa bɔgya nndzi dwuma wɔ mu na ama yaakɔ do atsena ase. Naaso bɔgya dze, yɛnnkɛgye ara da.
15 Yɛbɔ mbɔdzen dɛ yɛbɛyɛ ndzɛmba a ɔbɛma yeenya apɔwmudzen, naaso osiandɛ nkwa som bo ma Nyankopɔn ntsi, yɛrenngye bɔgya. Jehovah a yebetsie no wɔ asɛm yi mu no ho hia papaapa sen dɛ yebobu hɛn enyi egu ne mbra do dze aper hɛn nkwa. Jesus kãa dɛ: “Obiara a ɔpɛ dɛ ɔgye no nkwa no, ɔbɛyew no, na obiara a emi ntsi ɔbɛyew no nkwa no, obohu.” (Matthew 16:25) Osiandɛ yɛdɔ Jehovah ntsi na yɛpɛ dɛ yɛyɛ setsie ma no no. Ɔno na onyim dza oye ma hɛn. Ntsi, mbrɛ obu nkwa dɛ ɔyɛ krɔnkrɔn na ɔsom bo no, mbrɛ hɛn so yebu no ara nye no.​—Hebrewfo 11:6.
16. Ebɛnadze ntsi na Nyankopɔn no nkowaa yɛ setsie ma no?
16 Nyankopɔn no nkowaa anokwafo esi nketse dɛ wobedzi ne mbra a ɔfa bɔgya ho no do. Wonnkedzi, eso wɔnnkɔnom bɔgya, na dɛmara so na wɔnnkɛgye bɔgya wɔ hɔn ayarsa mu. * Mbom no, wɔbɛpen ndur a wɔdze si bɔgya ananmu no do mbrɛ ɔbɛyɛ a wobenya nkwa. Wɔgye dzi paa dɛ Nkwamafo nye bɔgya yɛfo no nyim dza oye sen biara ma hɔn. Ana egye dzi dɛ onyim dza oye sen biara ma wo?
DWUMA KORTSEE A JEHOVAH MAA KWAN MA WƆDZE BƆGYA DZII
17. Wɔ Israelmba no hɔn aber do no, ebɛn dwuma kortsee na Jehovah maa kwan dɛ wɔmfa bɔgya ndzi?
17 Wɔ Mbra a Nyankopɔn dze maa Moses no mu no, Jehovah kãa kyerɛɛ Israelmba no dɛ: “Osiandɛ honam no nkwa wɔ bɔgya no mu: na medze ama hom wɔ afɔrmbukyia no do dɛ wɔmfa mpata mma hom akra: na osian nkwa no ntsi bɔgya no na ɔpata ma.” (Leviticus 17:11) Nna sɛ Israelmba no yɛ bɔn a, wobotum aserɛ Jehovah hɔ bɔnfakyɛ dze nam abowa a wɔdze bɔbɔ afɔr no do, na wɔaaserɛ ɔsɔfo no dɛ ɔmfa abowa no bɔgyaa no bi mpetse afɔrmbukyia a ɔwɔ asɔrfi hɔ no do. Iyi nye dwuma kortsee a Jehovah maa Israelmba no kwan dɛ wɔmfa bɔgya ndzi.
18. Ebɛn hokwan na Jesus no nkwa a ɔdze bɔɔ afɔr no ma yenya?
18 Aber a Jesus baa asaase do no, ɔdze no nkwa anaa no bɔgyaa mae mbrɛ ɔbɛyɛ a yebenya bɔnfakyɛ. Iyi bɛhyɛɛ mbra a ɔhwehwɛ dɛ wɔdze mbowa bɔ afɔr no ananmu. (Matthew 20:28; Hebrewfo 10:1) Nna Jesus no nkwa som bo araa ma ntsi, ber a Jehovah nyaan Jesus kɔr sor no, nna Jehovah botum egyina no nkwa a ɔsom bo no do ama nyimpa nyina eenya hokwan atsena ase afebɔɔ.​—John 3:16; Hebrewfo 9:11, 12; 1 Peter 1:18, 19.
Ibesi dɛn akyerɛ obu ama nkwa nye bɔgya?
19. Ebɛnadze na ɔsɛ dɛ yɛyɛ na aama hɛn ho ‘asan wɔ nyimpa nyina bɔgyaa ho’?
19 Yɛda Jehovah ase dɛ ɔama hɛn nkwa dɛ akyɛdze a ɔyɛ nwanwa! Yɛpɛ dɛ yɛkã kyerɛ nkorɔfo dɛ, sɛ wɔwɔ gyedzi wɔ Jesus mu a, nna ɔno dze wobotum atsena ase afebɔɔ. Osiandɛ yɛdɔ nyimpa ntsi, yɛbɛyɛ dza yebotum biara dze akyerɛkyerɛ hɔn mbrɛ wobotum enya nkwa. (Ezekiel 3:17-21) Afei, tse dɛ ɔsomafo Paul no, hɛn mu biara botum akã dɛ: “Mo ho san hom nyina hom bɔgyaa ho. Na mannwodow ho dɛ mebɛkã Nyankopɔn apam nyina makyerɛ hom.” (Ndwuma 20:26, 27) Ampaara, sɛ yɛkã Jehovah ho asɛm nye mbrɛ nkwa si som bo ma no no ho asɛm kyerɛ afofor a, yɛdze kyerɛ dɛ yɛwɔ obu kɛse ma nkwa nye bɔgya.
^ nky. 16 Sɛ epɛ ndur a wɔdze si bɔgya ananmu ho nsɛm a, hwɛ nwoma a wɔato dzin “Keep Yourselves in God’s Love,” a Jehovah Adasefo etsintsim no ne nkrataafã 77-79.
NOKWASƐM 1: OBU A YƐBƐKYERƐ AMA NKWA
“Wo nkyɛn na nkwa nsunyiwa wɔ.”​—Ndwom 36:9
Yesi dɛn kyerɛ obu ma nkwa?
Ndwuma 17:28; Nyikyerɛ 4:11
Nkwa yɛ akyɛdze a ofi Nyankopɔn nkyɛn, ntsi ɔsɛ dɛ yebu nkwa.
Ewudzi na nyinsen-tugu muo.
2 Corinthfo 7:1
Kwetsir suban bɔn tse dɛ towanom nye ndubɔn a wɔdze dzi dwuma.
Kwetsir agodzi nye enyigyedze a basabasayɛ wɔ mu.
NOKWASƐM 2: NKWA NA BƆGYA
“Na honam nyinara no nkwa dze, no bɔgyaa ara nye no nkwa.”​—Leviticus 17:14
Nyankopɔn bu nkwa na bɔgya dɛn?
Bɔgya gyina hɔ ma nkwa.
Yebotum awe bɔgyanam, naaso yerunntum nndzi bɔgya no.
Ndwuma 15:28, 29; 21:25
Bɔgya a wɔdze dzi dwuma wɔ ayarsa mu a yebokwetsir no kã Nyankopɔn n’ahyɛdze a ɔnye dɛ yɛntwe hɛnho mfi bɔgya ho no ho.
Yɛnye Jehovah ntamu ebusuabɔ no nye adze tsitsir a ohia paa wɔ hɛn asetsena mu.
NOKWASƐM 3: DWUMA A WƆDZE BƆGYA DZI A JEHOVAH MA KWAN
“Jesus Christ bɔgya no tsew hɛn ho fi bɔn nyina mu.”​—1 John 1:7
Ebɛn hokwan na Jesus no nkwa a ɔdze bɔɔ afɔr no ma yenya?
Bible mber mu no, sɛ Israelmba no yɛ bɔn a, nna wobotum aserɛ Jehovah hɔ bɔnfakyɛ dze nam abowa a wɔdze bɔbɔ afɔr no do, na wɔaaserɛ ɔsɔfo no dɛ ɔmfa abowa no bɔgyaa no bi mpetse afɔrmbukyia a ɔwɔ asɔrfi hɔ no do.
Matthew 20:28; Hebrewfo 9:11-14
Aber a Jesus baa asaase do no, ɔdze no nkwa anaa no bɔgyaa mae mbrɛ ɔbɛyɛ a yebenya bɔnfakyɛ. Iyi bɛhyɛɛ mbra a ɔhwehwɛ dɛ wɔdze mbowa bɔ afɔr no ananmu.
Nna Jesus no nkwa som bo araa ma ntsi, ber a Jehovah nyaan Jesus kɔr sor no, nna Jehovah botum ama nyimpa nyina a wonya Jesus no mu gyedzi no hokwan dɛ wɔntsena ase afebɔɔ.
Fa mona Fa mona Obu a Yɛbɛkyerɛ Ama Nkwa